कर्म नै धर्म हो (लक्ष्मणरेखा) | चितवन पोष्ट दैनिक
–आचार्य लक्ष्मण भण्डारी
२०७७ चैत्र २५, बुधबार १०:१४ गते
हामीले सबैभन्दा धेरै चिन्ता गर्ने भनेकै शरीरको विनाशको बारेमा हो । हामीले धेरैपटक ‘यो शरीर म¥यो भने त हामी सधैँका लागि सकिन्छौँ’ भन्ने सोचेर अनावश्यक चिन्ता लिने गर्दछौँ । यो व्यर्थको चिन्ता हो । अर्जुनले यही चिन्ताको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । ठूलाठूला कुरा गर्ने अर्जुन शरीरको भने व्यर्थ चिन्ता गर्दछन् । हामीभित्र अज्ञानरुपमा शरीरबारेको मृत्यभयले जरो गाडेको हुन्छ । ‘म मरिहालेँ भने के होला ? यो सुन्दर संसार र यी घनिष्ठ आफन्तहरु छोडेर जानुपर्दा कसरी सह्य होला ? अहो ! सम्झँदै शरीर डरले ढक्क फुलेर आउँछ’– यसरी हामीले शरीर समाप्तिबारे चिन्ता गर्दछौँ ।
मनुष्यको आत्मालाई हतियारहरुले काट्न सक्दैनन् । यसलाई आगोले पनि जलाउन सक्दैन । पानीले पनि यसलाई गलाउन सक्दैन र हावाले पनि सुकाउन सक्दैन । हाम्रो शरीर पञ्चत¤वले बनेको हुन्छ । पञ्चत¤वभित्र पृथ्वी (माटो), जल (पानी), तेज (ताप), वायु (हावा) र आकाश (खालीपन) पर्दछन् । माटोपानी र हावाप्रकाशले बनेको शरीरमा विभिन्न विकारहरु आउने गर्दछन् । यी पञ्चत¤वका सहयोगमा बनेको शरीर यिनको सहयोग नहुनेबित्तिकै समाप्त भएर जान्छ । प्रकृति निश्चित नियम र अनुशासनमा छ । पञ्चत¤वका बलमा मनुष्य शरीरको निर्माण भएको हुन्छ । यसलाई काटकुट पार्न पनि सकिन्छ । आगोले जलाउन पनि सकिन्छ । हावाले सुकाइदिन पनि सक्छ भने पानीले गलाइदिन पनि सक्दछ । यसैले, हाम्रो शरीर अनित्य, क्षणभङ्गुर र अस्थायी छ ।
तर, जसका कारण हाम्रो शरीरले जीवन पाएको छ वा जसका कारणले हाम्रो शरीरमा गतिशीलता पैदा भएको हुन्छ त्यो आत्मत¤व भने सदैव अमर रहन्छ । शरीर र आत्मा दुई भिन्न विषय हुन् । जसरी शरीर पञ्चत¤वले बनेको हुन्छ, आत्मा त्यसरी बनेको हुँदैन । माटोपानीले बनेको शरीरमा विकार, विसङ्गति र दोषहरु अवश्य देखिन्छन् तर आत्मा स्वयं निर्मित शक्ति हो । यो हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहने छ । समयका कुनै पनि खण्डहरुले यसलाई बाँध्न सक्दैनन् । हावा, पानी र माटोजस्तो बाह्य प्राकृतिक स्रोतका कारण आत्मामा विकार पैदा हुने सम्भावना कहिल्यै रहँदैन ।
यसरी, पटकपटक हाम्रो मृत्युबारे हामीले गर्ने चिन्तनलाई भगवान् श्रीकृष्णले ‘व्यर्थको चिन्तन’ भनेर भन्नुभएको छ । आत्मा माटोपानीले बनेको भए पो यो समाप्त हुन्छ कि भनेर पीर मान्नु । यसको कहिल्यै निधन हुँदैन । माटोपानीले बनेको शरीर काटिएको देखेर हामीले हामी पनि काटियौँ भन्ने सोच्नुहुँदैन । हामी भनेका अविनाशी आत्मा हौँ भनेर अर्जुनलाई सम्झाइएको छ । हावा, पानी, माटो, आकाश र आगो कसैको पनि शक्तिले हाम्रो आत्मालाई नाश गर्न सक्दैन । यो त प्रकृतिदेखि पर छ, बाहिरी उहापोहको चक्रदेखि मुक्त छ ।
हाम्रो आत्मालाई छेदन गर्न कसैले पनि सक्दैन, किनकि यो अच्छेद्य छ, अक्लेद्य छ । यो दहन गर्न नसकिने भएकाले अदाह्य छ भने शोषण गर्न नसकिने भएकाले अशोष्य छ । यो नित्य छ, सर्वव्यापी छ, अचल, स्थिर र सनातन छ । मानिसहरु मरेर जान्छन्, तर तिनले गरेका पुण्यका कामहरु भने युगौँयुगसम्म सम्झनामा आइरहन्छन् । शरीर मरेर गएका मानिसहरु पनि प्रातःस्मरणीय र वन्दनीय भएका छन् । आत्मा एक्लै प्रकाशित हुन सक्दैन । दृश्यलाई आलम्वन बनाएर आफ्नो प्रभाव छोड्नु आत्माको विशेषता हो । शरीरको सहाराविना आत्माको अस्तित्व प्रकाशित हुन सक्दैन । शरीर आत्माको सहयोगविना कहिल्यै पनि गतिशील हुन सक्दैन । यदि शरीर विनाआत्मा जीवित रहन सक्थ्यो भने मृत्युपछि पनि त्यसरी नै गतिशील एवं चलायमान हुन सक्नुपथ्र्यो ।
यो आत्मा अव्यक्त छ, अचिन्त्य छ र अविकारी छ । आत्माको नित्यतालाई यसरी बुझेपछि पनि शोक गर्नु ठीक होइन । आत्माको स्वरुप, यसको विशेषता र गुणधर्म आदि हाम्रा शब्दहरुले व्यक्त गर्न सक्दैनन् । हामीले अनेक तर्क र शब्दहरु खोजेर आत्माका बारेमा जति बताउन खोजे पनि बताउन बाँकी थुप्रै कुराहरु रहिरहने छन् । हाम्रो भाषाले हामीलाई बताउने हो । संसार नै मानवीय भाषाको मूल विषय हो । आत्मा असंसारी र अलौकिक भएका हुनाले यसलाई हामी व्यक्त गर्न सक्दैनौँ, यो अव्यक्त छ ।
आत्मा अचिन्त्य पनि छ । यसको चिन्तन गर्न कहिल्यै सकिँदैन । हामीले बनाएका दर्शन, मान्यता र विचारले आत्मालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । यो यति विशाल र व्यापक छ कि यसबारे हामीले कहिल्यै पनि सोचेर सक्दैनौँ । यस्तै कुनै पनि विकार र दोषहरुले आत्मालाई स्पर्श गर्न सक्दैनन् किनकि यो अविकारी छ । हाम्रो मूल भनेको नै हाम्रो चेतना हो । हाम्रो शरीर आपैmँमा केही होइन । हाम्रो आदेश, इच्छा र उद्देश्य नभई हाम्रा अङ्गप्रत्यङ्गले कुनै पनि काम गर्न सक्दैनन् । हामीले कुनै वस्तु चाहेर हात अघि बढाउँछौँ र मात्र हामीले त्यो वस्तु हात पार्दछौँ । यसको अर्थ, हामी काम गर्ने साधन शरीर होइनौँ, मूलरुपमा शरीरलाई निर्देशन दिने निर्देशक आत्मा हौँ ।
हामीले आत्माको यो जुन शाश्वतता र नित्यता छ, त्यसलाई बुझेपछि पनि निरन्तर मृत्युको विषयलाई लिएर अनेक सोच्नुलाई ठीक मानिँदैन । अर्जुनले आफन्तको मृत्युबारे गरेको शोक र हामीले हाम्रो मृत्युबारे गर्ने चिन्ता पनि लगभग उस्तैउस्तै हुन् । आत्मा अनित्य छ । यसैले, यसको विनाश हुन्न भन्ने सोचेर हामी निर्भय जीवन बाँच्न उत्साही हुनुपर्दछ ।
आत्मा अमर छ, अविनाशी छ, अजर छ भन्नु र जन्मन्छ र मर्छ भन्नु पनि उस्तैउस्तै हुन् । परमात्मा शक्तिका अनेक रुप हुन्छन् । यो जुनबेला, जहाँ, जुनरुपमा पनि प्रकट हुन सक्दछ । नदीमा पानी बगिरहेको छ । नदीको गहिराइमा पनि बिजुली छ । त्यो नदीमा भएको पानीको विद्युत्शक्ति जब बाहिर आउँछ, त्यो विभिन्नरुपमा प्रकट हुन्छ । त्यही बिजुली शक्ति पङ्खा बनेर घुम्न सक्छ भने हिटर, फ्रिज, कम्प्युटर आदिआदि काममा प्रयोगमा आउन सक्दछ । यी सबै शक्तिका रुपान्तरण मात्र हुन् ।
अर्जुनलाई भगवान् श्रीकृष्णले सम्झाउनुहुन्छ : अर्जुन, पहिलो हाम्रो आत्मा अजर, अमर र नित्य छ भन्ने कुरामा शङ्का नगर । दोस्रो, यदि तिमीले आत्मालाई सधैँ जन्मने र मर्ने नै हो भन्ने ठान्दछौ भने पनि शोक गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन किनकि जन्म र मृत्यु त निरन्तरका प्रक्रिया हुन् । जो जन्मिएका छन् तिनको मृत्यु निश्चित छ भने जो मरेका छन् तिनको जन्म निश्चित छ । यस्तो निरूपाय विषयमा तिमी शोक गर्नका लागि योग्य छैनौ, अर्जुन । हामीले खेतमा धान रोप्दछौँ । धान रोपेर काटेपछि पनि फेरि त्यही धानलाई बीउका रुपमा रोप्न सक्दछौँ । खेतमा हरियो भएर फलेको धान फेदैदेखि काटेर खाली भएको खेतमा त्यही धान रोपेर फेरि हराभरा बनाउन सकिन्छ । धानको मृत्यु भए पनि धानको बीउ भने मरेको हुँदैन । त्यो धानले अवश्य पनि पुरानो बोट त पाउँदैन, तर नयाँ बोटमा खेतमा त्यसरी नै ऊ हराभरा भएर फेरि फुल्न र फल्न अवश्य सक्दछ ।
हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै हो । हाम्रा इष्टमित्र, छरछिमेकी, बन्धुबान्धव मरेर गए पनि ती फेरि जन्मने सम्भावना जीवितै रहेको हुन्छ । त्यही शरीर लिएर उनीहरु जन्मने सम्भावना त अवश्य रहँदैन, तर त्यही संस्कार र स्वभाव लिएर भने उनीहरु अवश्य जन्मन्छन् । यसैले, कसैको जन्ममा अति प्रसन्न हुने र कसैको मृत्युमा अति दुःखी हुने दुवै कुराको कुनै अर्थ छैन । जसको जन्म भएको छ, उसको मृत्यु निश्चित छ । जो मरे उनीहरु अवश्य जन्मने छन् ।
‘अर्जुन, तिम्रा आफन्तहरु त जन्मेदेखि नै मर्न सुरू गरिसके । उनीहरुको शरीरमा देखिने अनेकन परिवर्तनहरु पनि मृत्युका सानासाना घटना हुन् । तिमी पनि मृत्युबाट उम्कनेवाला छैनौ । तिम्रो शरीरको मृत्यु निश्चित भइसकेको छ । मृत्युलाई टार्न सक्ने शक्ति कसैसँग पनि छैन । यो निरूपाय विषय हो । अर्थात्, हाम्रो कुनै पनि बहानाले वा उपायले हाम्रो शरीरको मृत्यु रोकिनेवाला छैन । यस्तो अकाट्य र सर्वशाश्वत विषयलाई लिएर पनि तिमीले किन चिन्ता गर्दछौ ? त्यसैले, छाडिदेऊ मृत्युको चिन्ता गर्न र जीवनको अगाडि आएको कर्तव्यलाई निश्चिन्त भएर सामना गर । यही विरोचित धर्म हो’– यसरी भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई गीतामा दिव्यज्ञान प्रदान गर्नुभएको छ ।
यो संसार, हाम्रो सम्पर्कमा आएका साथीभाइ र सम्बन्धीहरु, यी सबै केही समयका पाहुना मात्र हुन् । हामी उनीहरुका पाहुना, उनीहरु हाम्रा पाहुना । हामी सबै यो संसारका पाहुनासिवाय केही होइनौँ । हामीले देखिरहेका छौँ : हाम्राअगाडि बेलीचमेलीहरु मुस्कुराइरहेका छन् । भीरपहराहरुमा लालुपाते र लालीगुराँसहरु मुस्कुराइरहेका छन् । खेतभरि धानका बाला झुलिरहेका छन् । मानिसहरु रमाइलोमा भुलिरहेका छन् । यी सबैसबै केही समयपछि हराएर जानेछन् । यी हिजो कहाँ यसरी आँखाले देखिने अवस्थामा थिए र ? यी सबै कता थिए, कस्तो अवस्थामा थिए, हामीलाई केही थाहा थिएन । अहिले केही समयअघिदेखि यसरी फुलिरहका छन् । मानिसहरु पनि रमाइरहेका छन् । अब केही समयभन्दा बढी यिनको पनि आयु छैन ।
जुन घरमा आज हामी बसेका छौँ, त्यहाँ हिजो कोही बसेको थियो र भोलि अर्को नयाँ कोही बस्ने छ । जुन गाउँमा आज हाम्रो बस्ती छ, त्यहाँ हिजो घना जङ्गल थियो र जङ्गली जनावरहरु परेड खेल्थे । आज हामी छौँ । के थाहा, भोलि फेरि यही गाउँ हिजोजस्तै निर्जन जङ्गलमा बदलिन के बेर ? आज हामी जुन सहरमा छौँ, यो सहर हिजो गाउँ थियो, त्यसअघि निर्जन र सुनसान जङ्गल । भोलि फेरि त्यही क्रम दोहोरिन के बेर ?
निर्माण, विनाश र निर्माण अथवा जन्म, मृत्यु र जन्म यी प्रकृतिका चक्रीय धर्मभित्रका सत्य हुन् । यिनलाई अन्यथा गर्ने शक्ति कसैसँग छैन । हामी आज देखिएका छौँ । हिजो थिएनौँ र भोलि पनि रहने छैनौँ । जहाँ केही पनि छैन, त्यहाँ भोलि केही पनि हुँदैन भनेर हामीले कहिल्यै पनि भन्न सक्दैनौँ । आज जुन भव्य सहर छ, हामी बसेको ठाउ छ, यो भोलि पनि यस्तै भव्य रहिरहन्छ भन्ने कुरा सत्य होइन । हिजो हामी थिएनौँ नि त ! तर पनि आज छौँ त ! हामी आज हुनुको अर्थ भोलि पनि रहिरहन्छौँ भन्ने होइन ।
संसार परिवर्तनशील छ । यो त्यत्तिकै गतिशील पनि छ । हामीले मानेका र जानेका ठूलाठूला मानिस आज हामीसँग छैनन् । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा छैनन् । विपी, गणेशमान, मदन भण्डारी, वीरेन्द्र कोही पनि छैनन् । आज हामीसँग धेरै छन् तर भोलि रहनेवाला छैनन् । हाम्रै्र आँखाअगाडि हामीले देख्दादेख्दै हामीले चिनेजानेका र देखेबुझेका मनिसहरु सयौँको सङ्ख्यामा अव्यक्त भएर गएका छन्, अदृश्य भएर गएका छन् अर्थात् मरेर गएका छन्, तर पनि हामी हाम्रो मृत्युको विषयलाई लिएर पलपल त्रस्त किन छौँ ? यही प्रश्नकै वरपर भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउनुभएको छ ।
आज हाम्रो शरीर हामीसँग छ । हामीले हाम्रो अस्तित्व स्वीकारेका छौँ । के हाम्रो उपस्थिति हिजो शरीर नभएको अवस्थामा थिएन होला त ? र के भोलि अर्को शरीरमा हामी न रहौँला त ? भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ : अवश्य थियौँ हिजो र रहनेछौँ भोलि पनि ।
ऋतु परिवर्तनको समय छ यतिखेर । पाखाबारीहरु खाली छन् । केही देखिँदैन । यसअघि मकैका बोट थिए । के अब मकैका बोटले यी पाखाबारीहरु फेरि हरिया नदेखिएलान् र ? बारीहरु खाली छन् भन्नुको अर्थ अब त्यहाँ केही हुँदैन भन्नु होइन । केही न केही त अवश्य हुन्छ । मकै नै लगाए पनि नयाँ मकैका बोट हुनेछन् । जे होस्, धरती बाँझो रहनेवाला छैन । हामी त सृष्टिका सामान्य अंश हौँ । प्रकृतिको यो विराट् योजनाभित्र हामी समेटिन आइपुगेका मात्र हौँ । प्रकृतिको यो सृष्टि र विनाशको योजनाको कुनै अन्त्य छैन । यो त अन्तहीन चलिरहने छ । त्यसैले, हामी जीवनको विषयलाई लिएर चिन्तित भइरहनुको कुनै अर्थ छैन ।
हामीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुछ, यही नै हाम्रो मूल धर्म हो । जब हामी निश्चित एवं शाश्वत जीवन र मृत्युको विषयलाई लिएर अनावश्यक चिन्ता गर्दछौँ, त्यतिखेर हामीले हाम्रा स्वास्थ्य, सम्पत्ति, समय र श्रम सबै गुमाउँदछौँ । त्यसले हामीलाई शीघ्र पतनको दिशातिर लिएर जान्छ । हामीले जीवन र मृत्युको सत्यलाई अन्तस्करणदेखि नै स्वीकार गर्दै आफ्ना अगाडि रहेको अहं दायित्वलाई निर्वाह गर्नुछ । जीवन र मृत्युको अनावश्यक चिन्ता गर्दा हाम्रो अगाडिको दायित्व छायामा पर्ने खतरा हुन्छ । जब, हामी दायित्वहीन हुन पुग्छौँ, त्यतिखेर हामी जीवनमा विजयी बन्न पनि सक्दैनौँ ।
शनिबार धादिङमा कोरोना संक्रमणबाट दुई जनाको मृत्यु